[Thursday, December 28th, 17] :: Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay inay la soo Wareegtey Maamulka Hawada
Muqdisho (RH) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Khamiis ah xarriga ka jaray dhismaha xarrunta cusub ee laga maamuli doonno hawada sdare ee Soomaaliya.
Munaasabad loogu dabbaal dagayo la soo wareegitaanka hawada sare ee Soomaaliya ayaa xilligan ka socota garoonka diyaaradaha magaalada Muqidsho.
Madaxweynaha ayaa ku ammaanay wasaaradda gaadidka iyo dhammaan cid kasta oo gacan ka geesatay in lala soo wareego maamulka hawada sare ee Soomaaliya.
Munaasabadda kale ee ka qeybgaleysa munaasabadda waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf, wasiirka arrimaha gudaha iyo fedaraalka Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirka amniga Maamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jamaal Maxamed, wasiirkii horre ee gaadidka dhulka iyo cirka Cali Jaamac Jangali, xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha ayaa kormeeray xarrunta laga maamuli doonno hawada sare ee dalkeenna.
Waa markii ugu horreysay oo hawada sare ee Soomaaliya laga maamulo tan iyo 1991-dii xilligaas oo dalka ay ka billowdeen dagaallo sokeeye.
Maamulka hawada Soomaaliya waxaa soddonkii sanno ee la soo dhaafay laga maamulayey magaalada Nairobi waxaana gacanta ku Hay’adda caalamiga ah ee Hawada Adduunka (ICOA).
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, oo ka hadlay xaflad lagu daah furayay xafiiska qalabka kontoroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda.
Masuul u hadlay hey’adda ICAO ee Qaramada Midoobay oo hadawada Soomaliya ka maamuleysay magaalada Nayroobi ayaa sheegay in wareeginta maamulka hawada Soomaaliya ay ku timid heshiis ay horey u kala saxiixdeen dowladda iyo Qaramada Midoobay.
posted on Thursday, December 28th, 17